MAQAAL: Maxaa u qabsoomay Dowladda Soomaaliya ee sannadka 2017? – Xeernews24
31. Dezember 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Muqdisho(Xeernews24)Inkastoo ay badan yihiin waxyaabihii u qabsoomay Dowladda, balse waxaan halkaan ku soo bandhiheynaa qoraal kooba oo aan kaga hadlayno waxyaabihii u qabsoomay Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Bishii Janaayo ee sanadka 2017, waxaa qabsoomay Doorashooyinka Labada Aqal, ee kala ah Mudanayaasha Golaha Shacabka iyo Senetarada Aqalka Sare, waxaa xiigay Doorashadii Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo, taasi oo dhacday 8-dii bishii Febraayo, waxaana xigay inuu isna magacaabo Ra’iisul-wasaare oo u doortay Xasan Cali Kheyre, isna waxa uu magacaabay Golihiisa Wasiirada.
Golaha Wasiirada ee Xukuumadda waxay xoogga saareen wax ka qabashada Abaarihii markaasi ka jiray Dalka, kuwaasi gurmad u galay sidii ay u samatabixin lahaayeen Dadkii ku xoolo beelay Abaartaasi, waxaay kaloo xoogga saartay sugidda ammaanka, waxaa kaloo wax laga taaban karaa inay kobcisay dhaqaalaha, islmarkaana ay la dagaalantay Musuqmaasuqa, Dowladda wanaag-na ay samaysay iyo inay xoojisay xiriirka dalka iyo Wadamada Caalamka iyo Hey’adaha Caalamiga ah. waxaa kaloo jira inay gogol xaar fiican u sii sameysay doorashada qof iyo cod ee sanadka 2021-ka.
Dowladdu waxay kaloo si weyn u maareeyasay Dhibaatadii ay geysteen Kooxaha nabad-diidka ah, kuwaasi qarax la beegsaday shacab Soomaaliyeed oo waxba galabsan, kaasi oo dhacay 14-kii Oktoober, iyadoo Xukuumaddu iyadoo kaashaneysa Ummadda Soomaaliyeed iyo Wadamada aan Saaxiibka nahay ku guuleysteen inay wax u qabtaan Dadkii ay Masiimadaasi wax ku noqday.
Dhinaca Ammaanka: Dowlladdu waxay xoogga saartay amniga Dalka Gaar ahaan Caasimadda Muqdisho, waxayna bishii May meelmarisay qorshaha loogu magac daray Xasilinta Magaalada Muqdisho, iyadoo la howlgaliyay 1.500 Askari.
May 11-keedii waxaa shir lagu qabtay Magaalada London ee Cariga Ingiriiska, kaasi oo lagu taageerayay Ciidanka Soomaalida, bishii Agusto waxay Dowladda isku soo dhiibay Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur, islamarkaana heshiis la gashay Dowladda.
Bishii Disember waxaa Muqdisho lagu qabtay shirkii amniga iyo iskaashiga Caalamka iyo Soomaalida, kaasi oo looga wada hadlay arrimo khuseeya amniga, nabadda,siyaasadda iyo horumarka.
Dowladda Turkiga oo ay saaxiibo dhow yihiin Soomaaliya ayaa ka furay Dalka Saldhig Millitari, kaasi oo lagu tababaro Ciidanka ay yeelaneyso Dowladda, waxaana goor dhow ka soo baxay Ciidan iyo waliba qalabkooda, waxaa kaloo jira Ciidan ay gacanta ku hayaan Immaaraatka Carabta.
Dhinaca Xiriirka Caalamka : Dowladdu waxay guul ka soo hoyday shirkii Caalamiga ahaa ee ka lagu qabtay London, taasoo ay ka mid ahaayeen in qorshaha horumarta Qaranka lagu saleeyo mashaariicda ay bixiyaan deeqbixiyayaasha. waxaa kaloo Dowladdu u guuleysatay inay dib Dalka ugu soo celiso Maxaabiix Soomaaliyeed oo ku dhibaateysnaa Wadamada Caalamka iyo kuwa kale oo heshiisyo lala galay sida Hindiya iyo Jasiiradda Siishalis, iyo kii ka dhacay Muqdisho, kaasi oo daba jooga Shirarkaasi.
6-dii bishii Juun Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay dhex-dhexaadnimo ka qaadatay muranka ka jira Wadamada Xunaha ka ah Golaha Iskaashiga Khaliijka oo ay isku hayaan Xulufo uu Sacuudiga hoggaamiyo iyo Qadar. waxaa kaloo ka mid ah waxayaabaha ay Dowladdu ku talaabsatay in soomaaliya ay heshiis ay kala saxiixdeen Dowladda Maraykanka bishii Disember 5-teedii , kaasoo dhigayay in Soomaaliya la siiyo 300 Malyan oo Doolarka Maraykanka ah, lacagtaasi oo loogu talagalay dhinaca horumarka.
Waxaa kaloo ka mid ahaa horumarka ay ku talaabsatay Dowladda inay heshiis la gashay Boqortooyada Sacuudiga, kaasoo ay u balanqaaday in Dalka ay ka sameyn doonto dib u dhisid Dhismayaasha Dowladda, Jidadka isku xira Gobolada Dalka, dib u howlgalinta Safaaradooda ay ku laheyd Muqdisho iyo inay kaabto Mushaaraadka Ciidamada iyo Shaqaalaha Dowladda, sidoo kale Dowladda Qadar ayaa iyana ballan qaaday dhismaha Waddada u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye, tan Muqdisho iyo Jowhar, dayactirka Dhismihii Xaruuntii Xisbiga, taasi uu sheegay Raiisul-wasaaraha inay noqon doonto midda ay ku shaqeynayso Xukuumadda, dhismaha Wasaarada Qorsheynta, Machadka Dibloomasiyiinta Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo kuwa kale.
Dhinaca Dhaqaalaha: Dowladdu waxay Baarlamaanka hor dhigtay hindise sharciyeedyo wax badan ka badeli kara dhaqaalaha Dalka, kuwaasi oo qaar ka mid ah la ansixiyay, kuwa kalena la filayo in la ansaxiyo, Golaha Shacabka ayaa ansaxiyay bishii Nofember 13-keedii shariga la dagaalanka Musuqmaasuqa, waxaa kaloo jira in la joogteeyay bixinta Mushaaraadka iyo Gunnooyinka Hey’adaha Amiga iyo Shaqaalaha Rayedka, waxaa kaloo jira in ay Dowladdu ku guuleysatay in dib loo soo celiyo maamulidda Hawada Soomaaliya, taasoo gacanta Dowladda ka maqneyd muddo ku dhow 27 sano, waxaana lagu macneeyay dib u soo celinteeda in dib loo soo celiyay Qaranimada Soomaaliya.
Hey’adda Lacagaha Adduunka ee IMF, ayaa qiimeysay waxqabadka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya, taasoo la raacayo barnaamijka SMP, oo ah kormeer ay sameeyeen shaqaalaheeda, iyadoo lagu tilmaamay mid lagu qanacsan yahay qaabka Daah-furnaanta Maaliyadeed ee sanadka 2017. Waxayaabaha kale ee sanadka 2017 ,la qabtay ee ku aadan dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaa ka md ah ansaxinta Miisaaniyaddii 2017, xisaab xirkii miisaanayaddii sanadkii 2016-kii iyo soo gudbinta iyo meel marinta Golaha Shacabka ee Miisaaniyadda 2018-ka.
Dowladda Soomaaliya oo loogu baaqay in ay xidho Safaaraadka Imaaraadka ee Muqdisho... Daawo:Booliska London oo ka digay tuuganimo casriya oo Haweenku fuliyaan oo...